So Yesu yɛ wo ntamgyinafo? – 4Jehovah (Yehowa)
“Yesu Kristo nnyɛ ntamgyinafo mma Yehowa Nyankopɔn ne adasemma nyinaa. Ɔyɛ ntamgyinafo ma N’agya Yehowa Nyankopɔn ne ɔman Yesrael Honhom fam nnipa a wɔn dodow yɛ 144000 pɛ”-World wide Security Under the Prince of Peace, kr. 10
“Susuw asɛnnibea a mmaranimfo ka ho no… ɛwom sɛ yenni asɛnnibea nka asɛm de, nti ɔkwan bi so no Yesu nyɛ wo mmaranimfo. Nnipa a wɔwɔ aman nyinaa mu nyae Yesu adwuma a ɔbɛyɛɛ so mfaso. Ɛwom sɛ ɔnyɛ wɔn asɛnnibea ntamgyinafo de, efisɛ wonni Apam foforo no mu, na mmom ɔyɛ wɔn kwan a wɔfa so kɔ Yehowa nkyɛn”-Ɔwɛn Aban August 15, 1989, kr. 31
Saa wɔammɔ mmaranimfo no paa a, wobɛyɛ dɛn abɛn no sɛ ɔnyɛ adwuma mma wo? Saa Yesu nnyɛ wo mmaranimfo…” (ntamgyinafo) a ɔkwan bɛn so na obetumi ayɛ adwuma sɛ asoeɛɛ a ɛne wone Onyankopɔn ntamgyinafo?
Tagged Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nkwagye
← Enti Yesu Nyanee sɛ Ɔbɔfopɔn Mikael no?
Enti Yesu wui wɔ mmeamudua anaasɛ asendua so? →